इनरुवा अस्पतालले दिने ल्याब रिपोर्टमा त्रुटी भएको बिरामीको ठहर - inaruwaonline.com
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र ०९, २०७८ समय: १७:४५:४३
इनरुवा अस्पतालले प्रदान गर्ने ल्याब रिपोर्टमा त्रुटी भएको पाइएको छ। इनरुवा अस्पतालले अल्ट्रासाउण्डको रिपोर्ट गलत दिएको बिरामीको ठहर छ। इनरुवा नगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने २३ वर्षिय युवक विरामी भै चेकजाँच गराउन इनरुवा अस्पताल फाल्गुण २२ गते पुगेका थिए। सो क्रममा चिकित्सकको सल्लाहा अनुसार उनले विभिन्न चेकजाँचहरु इनरुवा अस्पतालकै ल्याबमा गराएकाथिए।
नेपाल सरकारले प्रदान गरेको स्वास्थ्य विमाको सदुपयोग गर्दै उनले सम्पुर्ण चेकजाँचहरु अस्पतालकै ल्याब मै गराए। युवक स्थानिय भएकोले गर्दा उनको पहिलो रोजाई नै इनरुवा अस्पताल रह्यो तर अस्पतालले चेकजाँच पश्चातको प्रदान गर्ने ल्याब रिपोर्टनै संकास्पद रह्यो। अल्ट्रासाउण्डको रिपोर्टमा बाँया मृगौला तुल्नात्मकरुपमा आकार बढ्को देखियो। डाक्टर भगवानकै अर्को रुपहो सम्झि ल्याबको रिपोर्टमाथि विस्वस्त भए तर उनको शारिरक अवस्थामा कुनै सुधार नआएपछि उनि फाल्गुण २६ गते बिराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेज चेकजाँच गराउन पुगे। नोबेल मेडिकल कलजेमा उनको पुन: सम्पुर्ण चेकजाँच गरियो। तर नोबेलको अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्टमा बाँया मृगौला सामान्य रहेको पाइयो।
“म एक युवा र स्थानिय पनि भएकोले अहिले बदनामी खेप्दै आएको इनरुवा अस्पताल भित्रको व्यवस्थापनमाथि सकारात्मक सोच राख्दै चेकजाँच गराउन पुग्दा मेरो जिवन नै क्षति हुने अवस्थाबाट जोगिए।“ पिडित युवकको भनाई रहेको छ।
इनरुवा अस्पताल सुधार गर्नु पर्छ भन्ने कुरा नारामा मात्र सिमित भएको स्थानियहरु बताउछन्। केही समय एता इनरुवा अस्पतालमा चिकित्सकिय सेवा सुधारको अवस्थामा रहेता पनि अन्य सेवाहरु फितलो रहेको स्थानिय बताउछन्। ल्याबमा रहेका जनशक्तिको कमोजर कार्यकुशलताले गर्दा बिरामीले सास्ति पाएको स्थानिय बताउछन्।
यस विषयमा इनरुवा अनलाईनले नि. कार्यालय प्रमुख डा. देवराज घिमिरे संग बुझ्दा शारिरिक बनावटले कहिलेकाहि तेस्तो हुनसक्ने र यो सामान्य कुरो रहेको बताउछन्। यसले खासै असर समेत नपार्ने उनको कथन छ। मानविय त्रुटिपानि हुन सक्ने कुरामा डा. घिमिरे जोडदिन्छन्।